Agha agbachitere ndị mmadụ na Myanmar: Nkwupụta gọọmentị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Myanmar » Agha agbachitere ndị mmadụ na Myanmar: Nkwupụta gọọmentị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mianmaa kwupụtara agha
Mgbalị diplọma na Myanmar (Burma) iji kwụsị iweghara agha na ọgba aghara kụrụ afọ n'ala, n'agbanyeghị mmachi sitere na mba ndị ọdịda anyanwụ yana nrụgide sitere na ndị agbata obi Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Taa, gọọmentị mba dị iche iche nke Mianmaa kwupụtara "agha nchebe ndị mmadụ".
Gọọmentị Mịnịstrị na -ahụ maka ịdị n'otu nke Mianmaa (NUG) kwupụtara mwepụta nke agha nchebe ndị mmadụ megide ndị agha ndị agha na mba ahụ n'ụtụtụ Tuzdee.
Onye isi oche NUG nke Duwa Lashi La kpọrọ ụmụ amaala mba ahụ niile ka ha "nupụ isi megide ọchịchị nke ndị na -eyi ọha egwu nke onye ndu nnupu isi Min Min Aung Hlaing na -achị n'akụkụ niile nke mba ahụ."
Ọ kwuputala ọnọdụ mberede na mba ahụ iji kpochapụ ọchịchị aka ike nke ndị agha.
Gọọmentị onyinyo nke Myanmar ekwupụtala “agha nchebe ndị mmadụ” megide ndị agha obodo ahụ, bụ ndị weghaara ọchịchị na ntuli aka na February 1.
Duwa Lashi La, onye isi oche nke National Unity Government (NUG), nke ndị omebe iwu chụpụrụ, mere ọkwa a na vidiyo ezigara na Facebook na Tuesday.
Ọ kpọrọ onye isi ndị agha onye na -eyi ọha egwu mgbe ọ na -akpọkọta ndị na -agbachitere ndị mmadụ.
Site n'ibu ọrụ nke ichekwa ndụ na ihe onwunwe nke ndị mmadụ, Gọọmentị Ịdị n'Otu Mba… bidoro agha nchebe nke ndị mmadụ megide ọchịchị ndị agha, ”ka o kwuru.
"Dị ka nke a bụ mgbanwe ọha, ụmụ amaala niile nọ na Mianmaa niile na -enupụrụ ọchịchị ndị na -eyi ọha egwu agha nke Min Aung Hlaing na -edu n'akụkụ niile nke mba ahụ."
Mịnịsta nọ na ọgba aghara kemgbe ọchịchị aka ike nke onye isi ala Ming Aung Hlaing duziri. Njide ike kpalitere ngagharị iwe zuru ebe niile na mmegide nnupụisi, mana ndị ọrụ nchekwa jiri ike obi ọjọọ gbuo ha, gbuo ọtụtụ narị mmadụ na ijide ọtụtụ puku mmadụ.
Kedu ihe na-eme na Myanmar